Iza amin'ireo tetika fananganana trano no ho sarobidy amin'ny 2018?
Antenaina fa hampiharina amin'ny taona manaraka ny fehezan-dalàna momba ny fananganana rohy vaovao. Na izany aza, ireo fototra ireo dia hitovy foana. Ny taona ho avy dia hitondra antsika ny fiovana nomerika nomerika sy ny firoboroboana vaovao. Ny antsoina hoe fahagagana amin'ny aterineto dia hisy fiantraikany eo amin'ny tontolon'ny fikarohana karazana fikarohana rehetra, ka mitaky fomba vaovao momba ny SEO sy ny tranonkala finday sy ny Desktop.Ny Webmasters dia tsy maintsy mitady ny fomba vaovao hitondrana ny fitarihana. Antenaina ihany koa fa ny algorithm Google finday voalohany dia hanova tanteraka ny famelabelaranao amin'izao fotoana izao momba ny tsena dizitaly ary mahatonga fanitsiana any amin'ny tontolo SEO.
Ity lahatsoratra ity dia natao hanehoana ny mpamaky ny fomba hivoaran'ny tsena nomerika amin'ny taona manaraka ary inona no ilaintsika hotanterahina amin'ireo fiovana ireo.
Backlinks toy ny motera SEO amin'ny 2018
Nandritra ny taona vitsy lasa, dia niova imbetsaka ny fitsipika momba ny fanorenana rohy. Na izany aza, ny singa fototra dia mitoetra foana. Ny tanjon'ny tetikasa fanatsarana ny môtô dia ny famoahana ny votoatin'ny fikarohana sy ny fanentanana amin'ny mpamaky. Raha mendrika ny hamaky ny votoatinao ianao, dia mety ho zarazaraina amin'ny mpiserasera izay hitondra anao ranom-boaloboka organika.
Backlinks dia hitoetra ho môtera amin'ny fanavaozana ny milina fikarohana amin'ny taona 2018 sy any aoriana. Ny fitambaran-tranonkala tsara miaraka amin'ny tranokala iray sy ny tetikasam-panorenana tsara tarehy dia hampisy fitohanana fifandraisana eo amin'ny tranonkalanao sy ny tanjon'ny mpampiasa tranonkala. Google dia hamaritra ny toerana misy anao sy ny maha-zava-dehibe azy, mifototra amin'ny fahefan'ny tranonkala misy rohy avy aminao. Ity fomba fiasa ity dia mbola miorina tsara hatramin'izao ny fanavaozana ny Google Panda farany.
Fandrosoana fanorenana antenaina hopitaly amin'ny 2018
Backlinks dia hamaritra ny lazanao, ny fahefana ary ny fahitsim-ponenanao;
Ny marketing ara-nomerika rehetra dia hiankina amin'ny hatsaran'ny votoatiny;
Hivoatra ambony kokoa noho ny ankehitriny ny fifaninanana;
Ny manan-danja amin'ny teny fanalahidy dia manan-danja tokoa;
Avy amin'ny tranonkala azo itokisana ihany no tokony hividianana jiro.
Fomba azo antoka ho an'ny fananganana kalitao tsara
Mbola lavitra ny 2018 isika, saingy tokony efa fantatrao ny fanovàna amin'ny ho avy izay ho hitantsika Miezaha mandroso. Tokony ho fantatrao fa ny tetikady fanorenana fanorenana dia ho mahery vaika amin'ny raharaham-barotra ataonao sy ny tokony hijanonanao hametrahana ny tanjona fampiroboroboana. Ny tetikady fanorenana fanorenana manaraka hoavy manaraka dia hanampy anao hanohy hatrany ny fanavaozana ara-barotra nomerika.
Manangana ny rohy manuel
Androany, maro amin'ireo webmasters sy manam-pahaizana SEO no mandeha manamboatra ny rafitra fananganana rohy. Mazava ho azy fa afaka mamonjy ny fotoanao izy, saingy tsy hitondra vokatra tsara toy izany izy, raha afaka manao ny zava-drehetra amin'ny tanana ianao. Manoro hevitra anao aho mba tsy hamolavola ny fomba amam-panao amin'ny alàlan'ny taratasim-bola nalefan'ny programa iray. Ny mailaka toy izany dia tsy hahasarika ny sain'ny mpampiasa ary mametraka tsindrimandry diso momba ny marikao. Raha tokony izany, manorata ny mailakao, mametraha ny fanahinao tsirairay. Na izany aza, tsy voafetra ny fampiasana drafitra ankapobeny ho an'ity tanjona ity.
Manaova fanamafisana ny hatsaran'ny votoatinao
Amin'ny 2018 ny votoatiny dia hijanona ho laharam-pahamehana amin'ny SEO. Noho izany, alohan'ny hanombohanao hitadiavana ny toerana mety hapetrany eo amin'ny backlink, dia ataovy azo antoka fa manana antony iray tokony hampifandraisana anao amin'ny toerana voalohany. Ny votoatiny dia toerana tokony hanombohana ny fizotran'ny tranonkala fanatsarana. Mba hanamarihan'ny olona ny marikao, dia mila mamorona lahatsoratra avo lenta sy fikarohana ianao izay manan-danja amin'ny mpamaky Source .